Olee otú ịchọta oyiri Music Files na-ewepụ ha
Oyiri music faịlụ weghara ohere, n'iyi a zuru okè playlist na oge gị n'iyi mgbe ị na-agbalị ihichapụ ha. Ọ bụrụ na ị na-ebugote music ka iTunes, e nwere ike ihe mgbe ị ga-enwe otu music faịlụ na iTunes ghara-enwe ike ịmata ihe dị iche. Nke a bụ n'ihi iTunes ụdị faịlụ site faịlụ aha na size na-adịghị-gaa na akaụntụ ma ị na-ege ntị otu music.
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere bụ onye mfe ụzọ esi na nke a nsogbu?
1. Olee otú iji Chọta na Wepụ oyiri Music Files na TunesGo
2. Olee otú Chọta na Wepụ oyiri Music Files na Music Library on Windows
3. Olee otú Chọta na Wepụ oyiri Music Files na Music Library on Mac
Ọ bụ mgbe manụ ịhụ oyiri music na vidiyo na gị mgbasa ozi n'ọbá akwụkwọ. Na media Player dị ka iTunes, ọ bụ omume na ị ga-enwe nnukwu ego nke oyiri faịlụ. Ị nwere ike na-aga site ndị ọtụtụ puku songs na ihichapụ ha aka. Ị na-achọ pụrụ iche ngwá ọrụ nwere ike mee ka usoro a mfe.
Olee otú Chọta na Wepụ oyiri Music Files na TunesGo
N'ihi na iTunes n'ọbá akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihichapụ faịlụ site na gị iTunes Ọbá akwụkwọ, ngwá ọrụ dị ka TunesGo ga-bara uru. Ọ dị mfe iji na-eme mgbalị nke ihichapụ na oyiri media faịlụ mfe. TunesGo nwere otutu atụmatụ ikwe gị jikwaa music on iche iche na ngwaọrụ na-enweghị mmachi nke iTunes. Ebe a bụ otú i nwere ike ịhụ na ihichapụ oyiri songs n'aka gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
1. Gaa wondershare.com na ibudata na TunesGo. Mgbe nbudata, i kwesịrị iji wụnye ya. Otú ọ dị, jide n'aka na ị nwere iTunes arụnyere na gị na PC, na ya n'ọbá akwụkwọ nwere niile media na ngwaọrụ gị. Scanning media-ewe oge, ma ọ bụrụ na ị na-kwajuru na music faịlụ, ọ pụrụ ile a mgbe maka Doppler mezue.
2. Launch iTunes na ọ ga-egosi niile media ahụ n'ọbá akwụkwọ. Site isi window, pịa "Hichaa iTunes Library".
3. Ugbu a, TunesGo ga-akpaghị aka iṅomi maka oyiri songs na efu music mkpado na ndị ọzọ. Ugbu a pịa "nzacha na mkpocha" na a popup egosi nkwenye edinam. Ka anya dị ka ị na akwado ya, iTunes amalite iwepu oyiri songs na idozi ihe ndị ọzọ.
Nke a bụ ụzọ kacha mfe ka ihichapụ oyiri faịlụ site na ị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Olee otú Chọta na Wepụ oyiri Music Files na Music Library on Windows
Nwere oyiri music faịlụ gị Windows kọmputa? Ebe a bụ otú ị nwere ike ihichapụ oyiri music faịlụ site na Windows - ọ dị mfe na ngwa ngwa kwa!
Iji ihichapụ oyiri songs na gị Windows PC, ị na-achọ ndị ọzọ ngwaọrụ dị ka aka na-achọ na ihichapụ faịlụ ga-esi ike ma na-ewe. A ngwá ọrụ dị ka Audio Dedupe dị ukwuu maka ihichapụ oyiri songs na gị windows media. Audio Dedupe bụ ngwá ọrụ nke na-adịghị adabere na faịlụ size, aha, ma ọ ID3 mkpado. Ọ achọpụtazi songs na-egekwa ha ntị ga-ahụ myirịta. Nyochawa, ọ analysis ọdịyo ọbụna dị ka ọnụọgụ abụọ data koodu-abụ dị iche iche n'ihi otu faịlụ. Lee ndị nzọụkwụ ịhụ na ihichapụ duplicated faịlụ.
1. Open usoro ihe omume na pịa Add nchekwa. Ọ ga iṅomi na nchekwa maka mgbasa ozi faịlụ. Ọ na-ewe nkeji ole na ole ma ọ bụrụ na faịlụ ndị ọzọ.
2. Ugbu a họrọ Audio tụnyere n'okpuru Doppler Atiya, nke dị na dobe ala ndepụta.
3. Ugbu a kpatụ chọrọ uru gburugburu 70% ma ọ bụ karịa na myirịta. Nke a ga-tụnyere ụkpụrụ nke ọdịyo faịlụ.
4. Họrọ New Cache si cache ma ọ bụrụ na scanning maka oge mbụ ma họrọ ẹdude cache.
5. Ihe niile setịpụrụ ugbu a pịa Malite iṅomi.
1. Ugbu a, i nwere faịlụ kewara agba dị iche. Dị ka kwa ị Auto Tulee nhọrọ, usoro ihe omume-enyocha kwa faịlụ na ala bitrate, obere faịlụ size, ma ọ bụ mkpumkpu oge. Ọfọn, ị nwekwara ike iji esịtidem ọkpụkpọ ka ego faịlụ.
2. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwaga enyocha faịlụ ndị ọzọ click on Paghaa lelela faịlụ ma pịa Nhichapụ enyocha faịlụ.
N'elu usoro na-enye gị ọtụtụ nhọrọ iji họrọ N'ihi ya mgbe ọ pụrụ iyi mgbalị usoro. Otú ọ dị, ọ na-eme n'aka faịlụ na ị na-ehichapụ bụ n'ezie oyiri.
Olee otú Chọta na Wepụ oyiri Music Files na Music Library on Mac
Ebe a bụ otú ị nwere ike wepu oyiri music faịlụ na music n'ọbá akwụkwọ si Mac.
Ọ bụrụ na ị chọrọ, wepụ faịlụ site na gị Mac enweghị na-eji iTunes mgbe ahụ Gemini dị ukwuu ngwá ọrụ. Gemini na-mepụtara MacPaw. N'adịghị ka ndị ọzọ software, ọ nwere ike wepu nile di iche iche nke oyiri faịlụ site na gị usoro. Ọ dị ike, onye ọrụ-enyi na enyi, na nnọọ ngwa ngwa. Ị ga-enwe zuru ezu ịchịkwa ihe ị na-ihichapụ dị ka ị pụrụ ịhụchalụ ha n'ihu ihichapụ. Ebe a bụ otú ị nwere ike ihichapụ ha.
1. Download Gemini site na njikọ: http://macpaw.com/gemini na wụnye ya. 2. Ozugbo faịlụ arụnyere, dị nnọọ ẹkedori ya. On launching, ị nwere ike họrọ faịlụ ma ọ bụ ike iṅomi gị zuru ezu Mac maka oyiri faịlụ. Ọ ga iṅomi niile ụdị nke oyiri faịlụ na kpọmkwem ebe. 3. Ugbu a, ọ ga-egosi na faịlụ na-oyiri na ọ na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke duplicates nke faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepu, music faịlụ na-aga music na-ahụ faịlụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ha niile dị nnọọ pịa Auto họrọ n'elu. Ọ ga-họrọ niile faịlụ na-atụ anya otu odide mbụ. Ugbu a pịa na wepụ họrọ. 4. Ọzọ ihuenyo ị ga-ahụ faịlụ ahọrọ maka mwepụ. Deselect ọ bụla n'ime ha ma ọ bụrụ na-amasị gị. Ozugbo ị bụ n'aka banyere faịlụ, dị nnọọ pịa na wepụ na ala.
Nke a software bụ incredibility mfe ma dị mfe iji. Enyocha kwa-akpaghị aka, ịhụchalụ ya na ihichapụ ya. N'ime ole na ole clicks, ị ga-tufuo nke oyiri faịlụ gị Mac. Ọ bụ oké maka ihichapụ nile di iche iche nke faịlụ na Mac.
N'elu software-adị mfe dị site ha ukara eso. Otú ọ dị, Mac software nwere ike ibudata site Apple ụlọ ahịa. Otú ọ dị, tupu ihichapụ-eme ka n'aka na ihe faịlụ na ị na-ihichapụ ha na-oyiri maka gị. Gaa na ha ukara saịtị maka ozi ndị ọzọ na nkwado.
Apple Music Services mkpa ka ị mara
> Resource> Music> Olee otú iji Chọta oyiri Music Files na Wepụ